Madaxweyne Farmaajo oo maanta furay kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka – Kalfadhi
Madaxweyne Farmaajo oo maanta furay kalfadhiga 7-aad ee Baarlamaanka
in Aragti, Baarlamaanka, Falanqeyn, Warar
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa maanta furay kalfadhiga 7-aad ee labada aqal ee Baarlamaanka Jamuuriyadda Faderaalka Soomaaliya, kaddib munaasabad ka dhacday xarunta villa Hargeysa ee Magaalada Mogadishu.
Marka laga reebo xildhibaannada labada gole iyo guddoonka golaha, kulanka waxaa soo xaadiray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya iyo marti ka socotay qaar kamid ah maamul-gobolleedyadda.
Madaxweeyne Farmaajo oo khudbad ka jeediyay kulanka furitaanka ayaa ku dheeraaday ka hadlida guulaha dowladdiisa ay gaartay saddexdii sannadood ee lasoo dhaafay balse daqiiqadihii ugu horeeyay ee hadalkiisa ayaa waxaa qaar kamid ah xildhibaannada ay carqaladeyeen khudbadiisa balse dhowr daqiiqo kaddib ayuu dib u bilaabay hadalkiisa.
Mudane Farmaajo, ayaa khudbadiisa uga hadlay arrimaha, COVID-19, doorashooyinka, dhaqaallaha, amniga, caafimaadka, waxbarashadda iyo siyaasadaha dalka.
Mudane Farmaajo, ayaa ku ammaanay Baarlamaanka hadda shaqeeya in uu yahay midkii ugu shaqadda badnaa ee ansixiyay sharciyo badan, islamarkaana uu ahaa Baarlamaankii ugu wax-soo-saar badnaa iyadoo Baarlamaanka uu ahaa labo gole, inkastoo Soomaali uusan ka dhammaanin khilaaf, ayuu sii raaciyay.
In dowladdan ay tahay dowladdii shacabka waxaa daliil u ah in Baarlamaanka uu ansixiyay 50 sanno kaddib sharciga doorashooyinka oo awooda dib ugu celinaya shacabka Soomaaliyeed si ay u doortaan xisbiga iyo dowladda ay doonayaan, ayuu yiri.
Madaxweyne Farmaajo, ayaa xusay in doorashada ay ku dhici doonto xiligeeda, dhinaca kale waxaa uu ka codsaday xildhibaannada ay ka aqbalaan in Mogadishu kuraas laga siiyo golaha aqalka sare.
Mogadishu waxay mudan tahay metelaad ka badan 7 xubnood (Balse qaabkee lagu heli karaa?)
Nuxurka khudbaddii Madaxweyne Farmaajo, arrimaha doorashooyinka iyo COVID-19